Uyenza njani into ebhaliweyo yokuKhuphela kwiinjini zokuKhangela ngo-2014 | Martech Zone
Uyilungiselela njani into yokubhala ngokuBhala kweeNjini zokuKhangela ngo-2014
NgeCawa, ngoSeptemba 7, 2014 NgeCawa, ngoSeptemba 7, 2014 Douglas Karr
Siseneeseshoni zoqeqesho kunye nabathengi bethu ukucacisa imibuzo emininzi ngokubhekisele kwiinjini zokukhangela kunye nendlela yokubhala ukuphucula ukubonakala kwakho. Ecacileyo nelula awubhaleli iinjini zokukhangela, ubhalela abantu. Ndiyakholelwa ukuba ii-algorithms zikaGoogle ziye zaqhubela phambili ukuqaphela ababhali kunye negunya, ukwabelana nokwaziwa, izicatshulwa zomahluko, kunye nomxholo wokondla injongo yomkhangeli.
Ikopi yenye yezona zinto zibalulekileyo kwindawo yokuKhangela kweNjini yokuKhangela. Kodwa ngoGoogle uhlala etyhala uhlaziyo olutsha lwealgorithm kunye nokutshintsha imigaqo yomdlalo, kunzima kakhulu ukugcina umkhondo wento esebenzayo. Ngapha koko, kunzima ukwazi ukuba iinzame zakho zokwenza ngcono zenza ingozi engaphezulu kunokulunga kwizinga lakho. Nazi iingcebiso ezili-13 eziza kukunceda ubhale umxholo okwinqanaba le-2014. UMichael Aagard, Umxholo weVeve
Ngo-2014, i-infographic igxile ngokupheleleyo kumava afanelekileyo omfundi. Andikholelwa ngokunyanisekileyo ukuba oku kunjalo Ukubhalwa kwe-SEO, Ndingatsho ukuba iingcebiso zilungile nje copywriting iingcebiso. Ukusuka kumbono we-SEO, kusekho ithuba lokuqinisekisa ukuba umxholo omkhulu uboniswa kakuhle kwindawo yakho, nangona kunjalo. Ukunyanzelwa kwezihloko, amanqaku ahambelana noko, isikhundla kunye nolawulo lwenqanawa, imithombo yeendaba ezibonakalayo, ukuphendula okushukumayo… yonke loo miba ifuna ukudityaniswa nesicwangciso sakho somxholo ukuqinisekisa amava omsebenzisi omangalisayo. Xa oko kusenzeka, irenki enkulu yokukhangela iyakulandela!
tags: I-2014 SEOumxholocopywritingubuchule bokubhalaUMichael AagardUkukhuphela okubhaliweyoiingcebiso zokubhala okoikopi ebhaliweyo yokukhangela
Le nkalo inye yokuThengisa inokuthi ilahlekelwe yiNkampani yakho eyi- $ 4 yezigidi ngonyaka
Utyalo-mali olunexabiso eliphantsi kwiaudio luya konyusa ukuzibandakanya kweVidiyo